Archive du 20170703
Hery Rajaonarimampianina Hidi-bingo indray !
Sahiran-tsaina i Hery Rajaonarimampianina amin’ny fitantanana ny firenena amin’izao fotoana.
Fanovana governemanta Misy minisitra efa mihorohoro
Efa tena mafampana ny resaka any an-dapa any amin’izao fotoana izao noho ny fivoahan’ny resaka amin’ny hanoloana ny mpikamban’ny goverenemanta.
Fahefana mpanatanteraka Tsy tokony ho mpikambana ao amin’ny CSM
Nohamafisin’ny filohan’ny SMM (Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara) Fanirisoa Ernaivo nandritra ny fivahinianany tao amin’ny onjampeo vahiny «Africa 24»
Taratasin’i Jean Dia aiza ny anjaranareo ry Jean ?
Miarahaba anao aho ry Jean ! Tena nahafinaritra ahy rangahy ny fanazavana nomenao mikasika an’ity kandranay ity ilay tamin’ny indray mandeha iny a !
Sendika manerana ny nosy Hitady vahaolana mety amin’ny rehetra
Nanatanteraka fivoriambe tetsy Antaninarenina ny sabotsy teo ireo sendika marobe manerana ny nosy izay mitokona matetika noho ny fahatsiarovan’izy
Fanondranana olona mankany “Moyen orient” Vehivavy no atidohany
Rava ny tambajotra mpandefa na mpanondrana vehivavy ho any Moyen Orient na any amin’ireo firenena arabo.
SHELL extra Challenge Hahazo solika maimaimpoana ireo tsara vintana
Mba ho fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, indrindra fa ireo mahay misafidy ny hampiasa solika tsy mandany hampiasaina amin’ny fiarany dia mikarakara fifaninanana goavana ho azy ireo antsoina hoe :
Ady totohondry Malagasy avy any Congo Nitondra medaly alimo 2 nody
Tafaverina an-tanindrazana ny alakamisy 30 jona teo ny delegasiona Malagasin’ny taranja ady totohondry avy niatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika eo amin’ny “boxe amateur” andiany faha-18 notontosaina tany Congo-Brazaville ny 18 - 25 jona lasa teo.
Mafotaka indray ny resaka horonam-peo momba ilay mpanolotsain’ny filoham-pirenena, izay nilaza azy ho henjana sy tsy azo kitikitihina.
Amoron'i Mania Ben'ny tanàna 61 nofanin’ny CNaPS
Naharitra roa andro ny fiofanan’ireo ben’ny tanàna avy amina kaominina miisa 61 ao anatin’ny faritra Amoron’i Mania, izay natao mba hanatsarana ny fitantanana eny anivon'ny kaominina.
TVM SY SCOOP DIGITAL Mitady mpilalao sary mihetsika vaovao
Mitady mpilalao sary mihetsika vaovao hanome aina ilay tantara mitohy “Tsy misy mipika” ny televizona Malagasy sy ny tranom-pamokarana Scoop digital.
Fatina karàna teny Mangasoavina Nosamborina i Mainty
Voarohirohy ho anisan’ireo nikononkonona ny fakana an-keriny teratany karàna iray izay hita faty teny Mangasoavina Besarety, andro vitsivitsy lasa izay, i Tovoleka Be Jean na i Mainty.
Fanafihan-dahalo tany Tritriva-Betafo Olona 2 no maty
Efa isan’andro ny asan-dahalo ao Vakinankaratra sy ny manodidina raha tsy hilaza afa tsy ny ilany avaratry ny faritra Amoron’i Mainia, manasaraka ny faritra roa tonta iny.
Mirongatra ny asan-jiolahy mahery vaika any amin’ny distrikan’i Miandrivazo.